Mamindra ny famoahana sarimihetsika sy orinasa ny famindrana ny alikaola - Mamindra ny famoahana mpamono sarimihetsika i Shina
Izy ity dia sarimihetsika biby fiompy avo lenta vao novolavolain'ny R&D vao tsy ela akory izay, miaraka amina haingo matotra mahafinaritra, tsy misy fanakelahana afaka mamindra amin'ny alàlan'ny rantsan-tànana na esorina amin'ny rantsantanana. maina sy tsara coating famoahana.
Pejy Matte Matte kalitao Koreana kalitao famindrana ny sarimihetsika momba ny famindrana
Vita vita amin'ny volon-tseta vita amin'ny alikaola vita amin'ny alikaola miaraka amin'ny kalitao kalitao, tena tsara fiantraikany matte taorian'ny famindrana hafanana sy fanasana. Ny vatofantsika famoahana mafy sy mora mihetsika, tsy misy vinaingitra mihetsika maloto raha voatsindrona amin'ny sarimihetsika aorina rehefa vita pirinty. Tena tsara eo amin'ny fanaovana pirinty akanjo izy.
Silicone Matte famarana famindrana sary mihetsika amin'ny alàlan'ny famindrana